Hurumende Yotatarika Kutenga Mafuta eKufambisa Motokari
Gumiguru 11, 2016
Zvinhu munyika zvaita manyama amire nerongo sezvo makambani anotenga mafuta edzimotokari ari kuti ari kutadza kuwana mari kubva kubhanga guru renyika rereserve bank of Zimbabwe.
Munyori mukuru mubazi rezvemhando dzemoto VaPatson Mbiriri vanoti hurumende iri kuita chipatapa kuyedza kugadzirisa dambudziko iri kuti munyika musaite dambudziko rekushomeka kwemafuta ekufambisa dzimotokari.
Izvi kumwana weZimbabwe inenge yave nhamo yechikwepa kuti uku chakarumwa uku chinotsva. Parizvino vanhu vari kuswera vakamira mumitsetse kutsvaga mari kumabhanga.
Asi nhengo yeZanu-PF inomirira Dangamvura-Chikanga mudare reparamende uye vaine mabhazi VaEsau Mupfumi vanoti vanhu vekuManicaland vanenge vange vogara havo vachienda kunotenga mafuta kuMozambique uko mutengo wacho wakaderera.
VaMupfumi vati havo zvinonetsa kuziva kuti mafuta aya haakanganise here dzimotokari.
Vatiwo vane chivimbo chekuti hurumende ichagadzirisa dambudziko iri risati rakomba.
Mutungamiri weconfederation of Zimbabwe industries VaBusisa Moyo vanoti dambudziko iri rikasagadziriswa zvichaomera vemabhizmisi.
Vatiwo pane makambani akawanda achatatarika sezvo achishandisawo mafuta aya.
Vakawanda vari kushamisikawo kuti sei zimbabwe iri kutatarika nekushaya mafuta edzimotokari iyo iine kambani yemafuta enzimbe yeGreen Fuel? Vaimbova gurukota rezvemhando dzemoto VaElton Mangoma vave kutungamira bato reRDZ vanoti nyaya yehuori ndiyo yakanganisa chirongwa ichi.
Ko chii chingaitwe nehurumende kuti dambudziko iri ripere? VaMangoma vanoti hurumende yaVaMugabe yaremerwa nemutoro wekutungamira nyika.
Nyaya yekushomeka kwemafuta iyi hachisi chinhu chitsva muZimbabwe. Kubva muna 2000 pachine kambani yehurumende yenoczim zvinhu zvainetsa zvichikonzerwa kunnyaya nenyaya yehuori nekushomeka kwemari yekunze.
Nyanzvi munyaya dzezvehupfumi dziri kuyambira kuti dambudziko iri rikasagadzirwa nechimbichimbi hupfumi hwenyika hunogwadama.